कसरी तपाइँ कसरी टक्क्न जान लाग्नु हुन्छ भनेर जान्ने - शैलीको साथ पुरुषहरूमा सल्लाह स्टाइलिश पुरुषहरू
कसरी थाहा हुन्छ यदि तपाई तालुमा जानुहुन्छ भने
एलिसिया टोमेरो | | व्यक्तिगत हेरचाह, फिट, कपाल शैली, स्वास्थ्य
आज विज्ञान धेरै पक्षहरुमा विकसित भएको छ, जस्तै टक्कन समस्या जुन पुरुषहरुलाई यति धेरै टाउको दुखाई दिएको छ। र यसैले हो तपाईंको पतन ढिलाइ गर्न उपचारहरू छन् र कपाल बलियो बनाउन पनि। हाम्रो सेक्सनमा हामी केहि प्रक्रियाहरू र लक्षणहरूको साथ पत्ता लगाउन सक्छौं कि कसरी तपाईंलाई थाहा पाउन सकिन्छ यदि तपाईं तालुमा जानुहुन्छ भने।
यद्यपि अझै १००% प्रभावकारी छैन अझै केहि बर्ष जीतको समय हुन सक्छ। यसको सूत्र पत्ता लगाएर प्राप्त गर्दछ कि तपाईंको DNA के निर्धारण गर्ने हो यदि तपाई भविष्यमा बाल्डमा जान सक्नुहुन्छ। अन्य प्रकारका उपचारहरूका लागि स्वस्थ जीवन जीउन सल्लाह दिइन्छ।
1 कसरी तपाईलाई थाहा छ यदि तपाई तालुमा जानुहुन्छ भने?
1.1 DNA परीक्षणको साथ
1.2 प्रारम्भिक लक्षण र लक्षणहरू
2 के त्यहाँ पुरूषहरू टक्कलपनाबाट जोगिएका छन्?
कसरी तपाईलाई थाहा छ यदि तपाई तालुमा जानुहुन्छ भने?
निस्सन्देह सबै भन्दा राम्रो उदाहरण मूल्या our्कन गर्न हाम्रो पुर्ख्यौली जरामा हेर्नु हो यदि तपाईं आनुवंशिक कारणका लागि गाउँमा जान सक्नुहुन्छ। केश झर्ने निर्धारण गर्ने जीन प्राय जसो आमा र बुबाबाट प्राप्त हुन्छन् कपालको वृद्धि धेरै विभिन्न जीन द्वारा निर्धारित गरिन्छ। तसर्थ, तपाइँको संयोजन अद्वितीय हुन सक्छ र भाई बहनको जस्तै ढाँचाको पछ्याउनुपर्दैन।
DNA परीक्षणको साथ
त्यहाँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू छन् जसले DNA नमूनाहरू संकलन गर्छन् लारबाट हामी कसरी संवेदनशील हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न टेस्टोस्टेरोनले सिर्जना गरेको हर्मोनको लागि: डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन।
यदि एनालिटिक्स देखिन्छ यो हार्मोनको बढी संवेदनशीलता छ तपाईको कपाल झर्ने खतरा बढी हुन सक्छ। त्यहाँ केटाहरू को एक प्रभावशाली टाउको संग age० बर्ष पुग्न पुरुषहरु छन्, यो पक्कै छ किनभने तपाईंको संवेदनशीलता DHT न्यूनतम हुनुहोस्। यस नमूनामा, यो निर्धारण र पूर्वानुमान गर्न पनि सम्भव छ कि त्यस व्यक्तिले कपाल झर्ने औषधीको केहि प्रकारहरूमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन सक्छ।
प्रारम्भिक लक्षण र लक्षणहरू
त्यहाँ डाक्टरहरू छन् जसले भन्छन कि यो केवल डीएचटीप्रति तपाईको संवेदनशीलता मात्र हो जसले निर्धारण गर्दछ कि यदि तपाई कपाल झर्ने झुकावमा पर्नुहुन्छ भने, तर यसले निर्धारण पनि गर्दछ। हार्मोनहरू जुन जन्मजात थिए। पहिलो लक्षण २० बर्षको उमेरबाट देखा पर्न सक्छ।
पाँच मध्ये एक जनाले ती उमेरमा यी संकेतहरूको अनुभव गर्दछ। उमेर बढ्दै जाँदा, प्रतिशत बढ्छage० बर्षमा, यो अधिक महत्त्वपूर्ण र प्रगतिशील रूपमा दशकहरू बित्दै जान्छ। जब तपाईं ब्यूँझनुहुन्छ कपालका ट्रेसहरू तकियामा रहनेछन् वा त्यहाँ नुहाउने बाथरूममा नुहाउनेमा छोडिनेछ।
मुकुटमा कपाल घनत्व को घाटा यो सब भन्दा स्पष्ट संकेत मध्ये एक हो, जहाँ कपाल बिस्तारै बाहिर झर्नेछ जब सम्म यो क्षेत्रको बत्ती बनाउँदैन। अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्रवेशद्वारको अंश हो, जब उनीहरूले याद गर्न थाल्छन् कि निधार अधिक र अधिक फराकिलो हुँदैछ।
त्यहाँ पुरुषहरु पनि छन् जो अनुभव गर्छन् समयनिष्ठ तालु तपाईंको खोपडीको केहि क्षेत्रहरूमा, जहाँ समय बित्दै तिनीहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छन्। यो सिक्काको आकारबाट सुरू हुन्छ र यो निर्भर हुन्छ कि यो ध्यानयोग्य छ वा छैन यसको वरिपरि कपालको मात्रामा निर्भर रहन्छ र यसले यसको कन्ट्रास्टलाई अझ बढी उत्प्रेरित गर्दछ।
के त्यहाँ पुरूषहरू टक्कलपनाबाट जोगिएका छन्?
हामीले पहिल्यै निर्धारण गरिसकेका छौं कि निर्धारण गर्ने कारक जेनेटिक्स हो। हामी कसरी ना the्गो आँखाले धेरै पुरुषहरू प्रवेश गर्छन् पत्ता लगाउन सक्दैनौं धेरै कपाल भएको फिजियोगेमी। यो डाटा महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईको टाउकोमा प्रति सेन्टिमिटर जति अधिक कपाल छ, अधिक तपाईले राम्रो बाह्य केशिका देखा पर्नुहुनेछ लामो समय को लागी।
यदि तपाईको कपाल धेरै बाक्लो छ भने यो धेरै अधिक शक्ति संग कपाल राख्नको लागि पर्यायवाची हुनेछ। यस बिन्दुमा, रत्नयुक्त तहहरू पार गर्ने क्षमता जसले टक्कड उत्पन्न गर्दछ र त्यसैले पातलो हुने कारणले यो सजिलैसँग कमजोर हुने छैन।
यद्यपि, यी संकेतहरू धेरै क्रमिक छन् र यी संकेतहरू मार्फत धेरै मानिसहरूले उपचार लिन सक्छन् जसले तिनीहरूलाई फेला पार्न मद्दत गर्दछ यसलाई रोक्नको लागि एक प्रभावकारी उपचार। व्यक्तिगत हेरचाह धेरै को लागी गणना गर्दछ।
एक मानिस आफ्नो सम्भावित कपाल झर्ने को ख्याल राख्नु पर्छ धेरै कम तनावपूर्ण जीवन बिताउनुहोस्। राम्रो खानाको साथ खेल खेल्नु राम्रो स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ जुन शरीरभरि बल प्रदान गर्दछ।
केहि डाक्टरहरू केहि औषधीहरूको प्रयोगलाई कडा हतोत्साहित, जस्तै उपचार हर्मोनहरू, एन्टिडप्रेससन्टहरू, वा चिन्ताका गोलीहरू। एन्टिहाइपरटेन्सिभ ड्रग्स वा क्रिएटिन युक्त पूरकहरूले पनि डीएचटी उत्पादनलाई स्काइरोकेटमा पार्दछ।
त्यस्तै गरी तपाईंले बढ्तै जोगिनु पर्छ, धूम्रपान वा मदिरा सेवन गर्नु राम्रो हुँदैन किनकि ती कारणहरू हुन् कपालको शक्ति र उर्जा बिग्रन्छ। कपाल धुँदा, यो राम्रोसँग व्यवहार गर्न सजिलो हुन्छ, कुनै आक्रामक शैम्पू प्रयोग नगरी नै र आक्रामक रूपमा खोपडीको उपचार नगरी। तपाईं हाम्रो सुझावहरू पढ्न सक्नुहुन्छ "तपाईले कति पटक आफ्नो कपाल धोउनु पर्छ।"
यदि तपाईं अधिक सम्बन्धित शीर्षकहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं हाम्रो पोष्ट प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ "तालुको लागि सर्वश्रेष्ठ कपाल कटाई"। वा कहिले प्रयोग गर्ने micropigmentation पुरुषको टाउकोमा कपालको अभावलाई लुकाउनको विकल्पको रूपमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » कसरी थाहा हुन्छ यदि तपाई तालुमा जानुहुन्छ भने
कसरी जान्ने यदि तपाईं जवान हुनुहुन्छ जब तालुमा जानुहुन्छ
हेमोर्रोइड फुट हुँदा के गर्ने